Sady misatroka no mielo i Camille Vital | GAZETY_ADALADALA
Sady misatroka no mielo i Camille Vital
Posted on 07/04/2010 by gazetyavylavitra
Tsaroan’izay naharaka ny vaovao tamin’ny 27 Martsa 2010 fa nahazo (notolorana) helicopters ny tafika Malagasy. Re koa tamin’io fa namory manamboninahitra maromaro avy ao amin’ny taifka (tonga hatramin’ny avy any amin’ny faritany aza) ny Jeneraly Noel RAKOTONANDRASANA ka tamin’izany no nilazany fa fivoriana handinihana izay fomba hamahana ny krizy ilonan’ny firenena no anton’ilay fivoriana (izany hoe fivoriana politika izany). Re koa tato aoriana fa misy mivorivory any Vohipiraisana tany.
Nifamahofaho tao an-tsain’ny maro hatry ny ela, ary indrindra fa nanampy trotraka io voalaza etsy ambony io, ny amin’ny toerana raisin’ny miaramila manoloana ny olana diavin’ny firenena. Etsy andaniny koa moa dia efa hatry ny ela no hitan’ny maro ny maha-fitondrana mihanahana ( raiso amin’ilya lalantsaina hoe attentisme) ity fitondrana HAT ity.
Teraka koa teo anivon’io fitondrana io ny ady mangatsiakan’ny samy mpikambana ao anatiny ao, ka na efa nisy aza fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta sy ny fitondrana, dia gaga sy zendana ny mpitazana avy eo mahita mambra avy anatiny ao mivoaka ety ivelan’ny sehatra ka manao fanambaràna ho an’ny daholobe, manome ny heviny manokana (izay matetika no mifanipaka) amin’ilay fanapahana efanoraisin’ny governemanta.
Nisy tamin’ny gazety mpiseho isan’andro teto Madagasikara no namoaka ho lohateny lehibe ny mikasika ny Minisitra Noel RAKOTONANDRASANA. Ary dia nitontona io hariva io ny vaovao sy ny didy tamin’izay famisavisana natao an-gazety izay.
Nolazain’ny Praiminisitra Camille Vital àry fa mifamahofaho ny raharaham-pirenena ka namoaka didim-panjakana ny HAT, ary manomboka tamin’io fotoana namakiana ny didy io dia miloloha zavatra roa ny tenany: voalohany dia Praiminisitra izy, Faharoa indray dia raisiny ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena. Nofaritany ho tanjona amin’izany ny tsy maintsy hanatanterahana ny voalazan’ny fikaonan-doham-pirenen’ny foloalindahy sy n y hahatanterahan’ny fifidianana.
Fa izay tena nandrasako dia ity: Tsy niteny izay didy fanafoanana ny fanendrena ny Jeneraly Noel RAKOTONANDRASANA ingahy Camille Vital fa tonga dia ilay 2010 / 187 tamin’ny 07 Aprily 2010 no novakiany.
Mbola andrasako koa ny fanehoan-kevitr’ilay voakasika mivantana amin’izao raharaha izao, sy izay ho fanambaran’ny miaramila.
Dia ho sanatria ve hanaraka ny ‘afindrafindrao tsy azo avela’ sy ny fomban-drazana izay tsy hita ny maharatsy azy’? Tsy inona no tian-ko lazaina fa izao: matetika (raha tsy izay foana mihitsy aza angamba) dia izay olona esorina amin’ny toerana nahafatifaty azy teo amin’ny sehatry ny fanaovana politika na ny fitondrana teto Madagasikara, rehefa tonga amin’izay fotoana hoe nesorina izay, dia miditra any amin’ny laharan’ny mpanohitra avy hatrany (ozona ve sanatria?). Indrindra indrindra fa isan’ny antony nanesorana azy ny ‘fiampangana’ (na dia tsy tsorina mivantana aza) ho nikasa hanongam-panjakana. Angamba tsy hadinon’ny maro ilay fihetsiketsehana be teny Antaninarenina sy AMbohitsorohitra ny Zoma lasa teo hifoha Sabotsy. Dia samia miandry izay ho ampitso e!
Misy raha dônky anyyyyyy!
Filed under: anao ny fitenenana, politika, tapatapany | Tagged: camille vital, HAT, Noel RAKOTONANDRASANA |
« Hifanolotra atody Ny hevitra tera-bary (ao amin’ny SERASERA) »